Rikoooo - အဲယားဘတ်စ် A330-300RR FSX DOWNLOAD
ငါ့ကိုသတိရပါ အမည်မေ့နေပါသလား?စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? နေအိမ် ဖိုရမ် အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
downloadsအားလုံး downloads, FSX & P3Dလေယာဉ်ပျံတောတောင်ရှုခင်းရဟတ်ယာဉ်များမတူကွဲပြား FS2004လေယာဉ်ပျံတောတောင်ရှုခင်းရဟတ်ယာဉ်များမတူကွဲပြား စာရင်းအင်း ကုန်ဆိုင် နောက်ထပ်...
အဂျမ်ဘိုအစီအစဉ် Subscribeလှူဒါန်းရန်သမိုင်းဝင်ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်Rikoooo.com များ၏သမိုင်း ဂျမ်ဘို သင်ဒီမှာပါ:
FSX & P3D လေယာဉ်ပျံ
အဲယားဘတ်စ် A330-300RR FSX ကြော်ငြာ / အရက်ဆိုင်
- - အဲယားဘတ်စ်
- - ဘိုးအင်း
- - အန်တိုနော့ဗ်
- - တိုက်လေယာဉ်
- - အိုလေယာဉ်
- - လေယာဉ် (Uncategorized)
- - ရေယာဥ်ပျံ
- - Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ
- - မြောက်အမေရိကလေကြောင်း
- - လုံးရေယာဉ်စု
- - စက်မဲ့လေယာဉ်
- - Britten-Norman အဘိဓါန်
- - ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ
- - Piasecki PHC ကို
- - အမျိုးမျိုးသောရဟတ်ယာဉ်
- - ဘဲလ်လေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်းက
- FSX & P3D များအတွက်အမျိုးမျိုးသော
- - ပြုပြင်မွမ်းမံ
- - စီမံကိန်းများ, ရှေ့ပြေးပုံစံ
- FSX & P3D ရှုခင်း
- - လေဆိပ်မှ
- Tools များ
- - ပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို
- - ရုရှားတိုက်လေယာဉ်
- - ပြင်သစ်တိုက်လေယာဉ်
- - အမျိုးမျိုးသောတိုက်လေယာဉ်
- FS2004 များအတွက်အမျိုးမျိုးသော
- FS2004 ရှုခင်း
- - အမျိုးမျိုးသောရှုခင်း
- - အမျိုးမျိုးသော
- - အမျိုးမျိုးသောလေယာဉ်ပျံ
- X-လေယာဉ်9လေယာဉ်ပျံ
- - ကိရိယာများအားရေငုပ်သမား
အဲယားဘတ်စ် A330-300RR FSX HOT
စာရေးဆရာဘရိုင်ယန်ကို C Size ကို 30 ကို MB
downloads 41 287
Changed 31-07-2013 18: 59: 29
လိုင်စင် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ ကသာ 2D Panel ကို
ဆိပ်ကမ်း-ကျော် FS2004 (မျှ DXT10)
Add-on FSX & FSX-ရေနွေးငွေ့နှင့်သဟဇာတ
ဒီလေယာဉ်ကို FSX အဘို့ဖြစ်၏။5liveries ပါဝင်သည်။ တကယ့်အဲယားဘတ်စ်မှမှတျတမျးတငျထားစံနမူနာနှင့်လက်တွေ့ကျကျအသံ။ texture နှင့်လေယာဉ်မော်ဒယ်အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ကြော်ငြာ / အရက်ဆိုင်
တွမ်အဲယားဘတ်စ် A300-600R ထိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ FSX Downloads: 21 525အဲယားဘတ်စ် A318-111 Unpainted ပြင်သစ်လေကြောင်း FSX Downloads: 14 654အဲယားဘတ်စ် A300 Multi-livery Mega Pack ကို FSX & P3D Downloads: 71 431အဲယားဘတ်စ် A340 Mega Package ကို Vol2FSX & P3D Downloads: 67 390တွမ်အဲယားဘတ်စ် A340-200 FSX Downloads: 28 287အဲယားဘတ်စ် A380 ပြင်သစ်လေကြောင်း FSX Downloads: 46 767JetBlue A320 Mega Pack ကို FSX & P3D 2Downloads: 14 688အဲယားဘတ်စ် A320-214 ဆွစ်ဇာလန် FSX & P3D Downloads: 36 386
နောက်ဆုံးရ Files တွေကိုBeech Expeditor Mk.III FSX & P3D - v2.102-03-2017Chios ကျွန်း LGHI Photoral FSX & P3D 02-03-2017မြောက်အမေရိက RA-5C Vigilante FSX & P3D - v2.502-02-2017Davao အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် FSX & P3D - v101-02-2017Hillsboro လေဆိပ် KHIO FSX & P3D 16-01-2017
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်Posky ဘိုးအင်း 777-300ER ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်း FSX & P3D 26-02-2017ကွိဘက်စီးတီး 2.0 FSX & P3D 04-02-2017HD ကို Jetway နှင့်လေဆိပ်ကားရပ်နား FSX & P3D 22-01-2017
Rikoooo အပေါ် Advertiseအလွယ်တကူအရည်အသွေး website တွင်ကြေငြာနှင့်သင့်ဂုဏ်သတင်းကိုတိုးမြှင့်!
Facebook ကစာမျက်နှာFacebook ပေါ်မှာ rikoooo မှသတင်းများ
လှူဒါန်းရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို Enable နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဆက်ထိန်း
30.03.2017 2005 - 2017 Rikoooo.com All rights reserved | CNIL 1528113 downloadsအားလုံး downloads, FSX & P3Dလေယာဉ်ပျံတောတောင်ရှုခင်းရဟတ်ယာဉ်များမတူကွဲပြား FS2004လေယာဉ်ပျံတောတောင်ရှုခင်းရဟတ်ယာဉ်များမတူကွဲပြား စာရင်းအင်း ကုန်ဆိုင် နောက်ထပ်...
အဂျမ်ဘိုအစီအစဉ် Subscribeလှူဒါန်းရန်သမိုင်းဝင်ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်Rikoooo.com များ၏သမိုင်း